Fandefasana - rojom-pamokarana manaraka
Ny NeXTChain dia miara-miasa amin'ireo mpitatitra 300+ hanomezana ny fandefasana manerana izao tontolo izao.
Ny fizotran'ny fizarana baiko
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fandefasana NeXTChian?
1. Mpiara-miasa amin'ireo mpitatitra 300+ manerantany, ny orinasanay dia afaka manome fandefasana haingana sy lafo, izay afaka manampy ny mpivarotra Shopify hanitatra ny orinasan-dry zareo dropshipping manerantany. Tsy i Etazonia ihany.
2. Miorina amin'ny rafitra fanaraha-maso lozisialy matanjaka manokana, NeXTChain dia manome fanavaozana isan'andro ny famandrihana isaky ny parfilie feno nataon'i NeXTChain. Izy io dia afaka manampy ny mpivarotra Shopify hanara-maso ny fonosany sy hitantana ny baiko rehetra amin'ny fomba mahomby sy mora, raha sendra mifanatrika amin'ny sombin-javatra tsy ara-potoana sy mampihena ny fatiantoka.
3. NeXTChain dia hanitsy ny tobin'ny mpitatitra amin'ny rafitra logistik manan-tsaina mandritra ny vanim-potoana fara tampony toy ny Black Friday sy Krismasy, hahazoana antoka fa ny mpanjifa dia afaka mandray ny fonosany eo aloha.
4. Na inona na inona sanda ara-toekarena, Fast Express na Ship by Sea, NeXTChain no safidinao tsara indrindra.
Momba ny fandefasana
7 - Andro fiasana 11 *
8 - Andro fiasana 12 *
6 - 8 Andro fiasana *
8 - 10 andro fiasana *
3 - 5 Andro fiasana *
5 - 8 Andro fiasana *
6 - 10 andro fiasana *
7 - 10 andro fiasana *
14 - 22 Andro fiasana *
15 - 25 Andro fiasana *
Ny ora lisitry ny fotoana fitaterana dia tsy ahitana ora fanodinana hatramin'ny 2 andro (tsy ankanavaka ny sabotsy, alahady ary fialantsasatra).
Ny fotoana fandefasana dia tombanana ary manomboka amin'ny daty fandefasana, fa tsy ny datin'ny filaminana, ary mety haharitra kokoa noho ny daty nandrasana noho ny adiresy tsy mety, ny fomba fanao amin'ny fadin-tseranana na ny antony hafa.
Noho ny COVID-19 ， ny tombana amin'ny fotoana hahatongavana dia 15-45 andro.
Traikefa ho an'ny mpanjifa
Zava-nisongadina ny tombotsoan'ny NeXTChain
Fa maninona no tsara kokoa ny Nextschain?